Antso avo ho amin'ny asa | Mai più miseria
Miasa ny rehetra ho amin'ny fahamendrehana
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena ATD Quart Monde sy ny Komity Iraisam-pirenena ho an’ny 17 oktobra dia manasa anao hanoina an’izao Antso ho an’ny Asa izao.
Fanamby mbola tsy nisy ohatra izany no tsy maintsy atrehin’ny olombelona ary mila ny fahaizan’ny rehetra izany, tsy azontsika ekena intsony ny fanimbana ny olona noho ny fahantrana.
Herisetra ny fahantrana lalina. Mahatonga fitsaratsaram-poana sy fanambaniana izy, mampihiboka ao anaty fahanginana, mamotika fiainana. Izy no vato be misakana ny fandriampahalemana sy ny fiainana ho an’izao tontolo izao.
Saingy tsy lahatra akory ny fahantrana. Azo atao ny mandà azy tahaka ny nanaovana ny fanandevozana sy ny fanavakavaham-bolon-koditra. Efa nandà azy hatrany hatramin’izay ireo izay iharany, ary mila ny fahaizan’izy ireny izao tontolontsika izao.
Fotoana izao tsy maintsy anorenana izao tontolo izao tsy misy olona atao ankilabao. Afaka mifampianatra isika samy isika hiala amin’ny fisainana manilikilika sy manjakazaka izay nitondrana ny fifandraisan’ny olombelona hatramin’ny efa ela loatra izay. Olona avy amn’ny sehatra maro ary fikambanana sesehena no miombon-kevitra amin’ilay antso hirotsaka an-tsehatra nataon’i Joseph Wresinski, mpamorona ny ATD Quart Monde, tamin’ny 17 oktobra 1987, andro iraisam-pirenena voalohany nandavana ny fahantrana lalina.
« N’aiza n’aiza misy olona voatery hiaina ao anaty fahantrana lalina dia voahosihosy ny zon’olombelona. Adidy masina ny mivondrona mba hampanajana izany zo izany. »
Antso tsy mihetraketraka io ho valin’ny hetraketraky ny fahantrana. Io no nahafahan’ny mponina sy ny fianakaviana voailikilika niala tamin’ny fahanginana sy niara-nientana tamin’ny hafa ary nahazo mpihaino.
Nanomboka tamin’ny 1987 dia nihamaro hatrany ny olona avy amin’ny sehatra maro be no mba lasa sahy koa nanambara ny fandavany ny fahantrana lalina ary niasa, nisy fikambanana nirotsaka an-tsehatra. Ny asan’izy ireny dia porofo fa ho vitantsika ny mandresy ny fanilikilihana sy ny fahantrana lalina raha ohatra isika ka miray hina.
Asehony fa rehefa miaraka dia azo atao ny manorina izao tontolo izao miadana, afaka amin’ny fahantrana lalina, sy ny tahotra, ahitana ny olona tsirairay samy manome ny tsara indrindra any aminy.
Izaho koa misafidy ny hiasa mba ho afaka amin’ny fahantrana lalina izao tontolo izao.
Joseph Wresinski Lapide commemorativa Eventi Testimonianze Comité International 17 ottobre Letter to Friends Diritto alla salute